श्रीमती साटासाट गर्नुको नयाँ खुलासा यस कारण यस्तो नसोचेको घ’टना घट्यो (भिडियो सहित हेर्नुहोस्) – Nepali Janata Khabar
श्रीमती साटासाट गर्नुको नयाँ खुलासा यस कारण यस्तो नसोचेको घ’टना घट्यो (भिडियो सहित हेर्नुहोस्)
प्रकाशले आफुसंग विवाह गर्न द’वाव दिएको पनि नरेशको श्रीमतीले बताएकी छन् । म संग विवाह गरि’नस् भने तेरो श्रीमानलाई जे पनि गर्न सक्छु भनेर द’वाव दिएको नरेशको श्रीमतीको भनाई छ । नरेश प्रकाशको श्रीमतीसंग लाग्नु’भन्दा पहिला पनि अन्य युवतीहरुसंग पनि नजि’किएको उनको भनाई छ ।
दक्षिणकाली माताको उत्पती कसरी भयो? पढेर ॐ लेखी सेयर गर्नुहोस् !!
विदेशी पर्यटक आवागमनलाई सहज बनाउन सरकारको यस्तो तयारी